Izindaba - Forward130th Canton Fair izobanjwa kokubili ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi
NgoJulayi 21, iwebhusayithi esemthethweni yoMnyango Wezohwebo wePeople's Republic of China yamemezela ukuthi umbukiso we-130 we-China Import and Export Fair (Canton Fair) uzoba ku-inthanethi futhi ungaxhunyiwe ku-inthanethi kusukela ngo-Okthoba 15 kuya kuNovemba 3, kanye nesikhathi esiphelele sombukiso. izinsuku ezingu-20.
I-130th China Import and Export Fair (Canton Fair) izobanjwa phakathi kuka-Okthoba 15 noNovemba 3 ngefomethi ehlanganisiwe ye-inthanethi nengaxhunyiwe ku-inthanethi. Izigaba zemikhiqizo engu-16 ezigabeni ezingu-51 zizokhonjiswa futhi indawo yasemakhaya izokhethwa kokubili ku-inthanethi nasendaweni ukuze kuboniswe imikhiqizo efakiwe evela kulezi zindawo. Lo mbukiso uzobanjwa ngezigaba ezi-3 njengenjwayelo, isigaba ngasinye sithathe izinsuku ezi-4. Indawo yombukiso ifinyelela ku-1.185 million m2 kanye nenani lamadokodo ajwayelekile azungeze i-60,000. Abameleli baseShayina bezinhlangano nezinkampani zaphesheya kwezilwandle, kanye nabathengi basekhaya bazomenywa ukuba bathamele uMbukiso. Isizindalwazi se-inthanethi sizothuthukisa imisebenzi efanele umcimbi osendaweni futhi ilethe izivakashi eziningi ezizothamela uMbukiso ongokoqobo.
I-Canton Fair ingumcimbi wokuhweba wamazwe ngamazwe obanzi onomlando omude kakhulu, isikali esikhulu kunazo zonke, uhlobo oluphelele lokubukisa, kanye nenzuzo enkulu yebhizinisi e-China. Ibanjwe eminyakeni eyikhulu ye-CPC, i-130th Canton Fair ibaluleke kakhulu. UMnyango Wezohwebo uzosebenzisana noHulumeni WesiFundazwe sase-Guangdong ukuthuthukisa izinhlelo ezehlukene mayelana nenhlangano yemibukiso, imisebenzi yokugubha kanye nokuvinjelwa nokulawula ubhubhane, ukuze kuqhutshekwe nokudlala indima ye-Canton Fair njengenkundla yokuvula yonke indawo futhi kuhlanganiswe izinzuzo ekuvimbeleni nasekuvimbeleni ubhubhane. ukulawula i-COVID-19 kanye nentuthuko yezenhlalo nezomnotho. LoMbukiso uzohlinzeka ngephethini entsha yentuthuko nokusatshalaliswa kwasekhaya njengensika kanye nokusatshalaliswa kwasekhaya nokwamazwe ngamazwe kuyaqina. Izinkampani zaseShayina nezamazwe ngamazwe zamukelekile ukuvakashela umcimbi omkhulu we-130th Canton Fair ukuze zakhe ikusasa elingcono.
Ukuzalanisa Okuyinhloko Enjini Yasolwandle, I-Trust In Connecting Rod, I-Conrod Bearing, I-B58 Rod Bearings, I-Top End Bearing kanye ne-Bottom End Bearing, I-Thrust Bearing Enjinini,